အက်ပဲလ်သည်နည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အကူပြု application တစ်ခုတီထွင်နေသည် ငါက Mac ကပါ
အလားအလာများထဲမှတစ်ခုကတော့ Apple မှာရှိသည် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု y ထောက်ပံ့နှင့် Apple မှအစီရင်ခံစာအသစ်အရ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေနေသည် ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန် ဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှုပေးပါ။ နို ၀ င်ဘာ ၂၀ ရက်ကထုတ်ပြန်သောအစီရင်ခံစာအရအက်ပဲလ်က iOS အတွက်သုံးစွဲသူအခြေခံကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်မည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုတီထွင်နေသည်ဟုအစီရင်ခံသည် သင့်ရဲ့နည်းပညာပံ့ပိုးမှုန်ထမ်းများပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြုမူကူညီပေးပါ။ ပြproblemsနာများ၏ဖြေရှင်းချက်ကိုသင်၏စက်အတွက်အကြံဥာဏ်များစွာနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ရွေးချယ်စရာများဖြင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဒီရွေးချယ်မှုများဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ် မက်စ်၊ အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပက်နှင့်အခြား Apple အမှတ်တံဆိပ်ပစ္စည်းများ.
တရား ၀ င်မဟုတ်သောအက်ပလီကေးရှင်းမှဓာတ်ပုံများကို Sonny Dickson သို့ပေးပို့ပြီးအစပိုင်းတွင်တင်ခဲ့သည် uSwitch Tech မှနှင့်လျှောက်လွှာကိုယ်နှိုက်နှင့်ပါတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာကိုပြသသည် လျှောက်လွှာနှင့်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်ဟုန်ဆောင်မှုများ.
အထူးသဖြင့်လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုသူများသည် ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် Apple နည်းပညာအထောက်အပံ့အဘို့အ option တစ်ခုအပါအဝင် ချက်တင်စကားပြော။ သုံးစွဲသူများသည်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည် သင်၏ကိရိယာကိုဝန်ဆောင်မှုသို့ပို့ပါသို့မဟုတ် Apple Store သို့အလည်အပတ်သွားရန်စီစဉ်ထားသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်အထောက်အကူပြုစာရွက်စာတမ်းအမျိုးမျိုးကိုဖတ်ရန်ရွေးချယ်စရာလည်းရှိသည်။
အရင်းအမြစ်တစ်ခုအရကန ဦး အစီရင်ခံစာသည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း application အသစ်သည် client နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြသည် Apple က ID ကို။ ဆိုလိုသည်မှာသင်မှတ်ပုံတင်ထားသောစက်ပစ္စည်းအားလုံးသည်ဤလျှောက်လွှာ၏အကူအညီကိုရနိုင်သည်၊ သင်၏မှတ်ပုံတင်ထားသောထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက်အထောက်အပံ့သို့မဟုတ်နည်းပညာအကူအညီများပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အဖြေမရတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေသေးတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့မသိသေးဘူး သီးခြား appသို့မဟုတ် ဇာတိအနာဂတ် iOS သို့ပေါင်းစည်းနိုင်ပါတယ် အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများလိုပဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » Apple က support application တစ်ခုကိုတီထွင်နေတယ်
Apple bug အသစ်